10 amin'ireo tononkalo mampionona sy mahafinaritra indrindra momba ny fahafatesana - Blog
10 amin'ireo tononkalo mampionona sy mahafinaritra indrindra momba ny fahafatesana
Ny poezia dia afaka mampita zavatra izay tsy hain'ny endrika fanehoan-kevitra hafa.
Ary tsy misy maha samy hafa azy raha ny lohahevitra dia misy fiantraikany amintsika rehetra: fahafatesana.
Na amin'ny maha olona malahelo olon-tiana na olona mibanjina ny fahafatesany manokana, ny tononkalo dia afaka manetsika eritreritra sy fihetseham-po hanampy antsika rehetra hiatrika ilay tsy azo ihodivirana.
Ity ny sombin-tononkalo 10 tononkalo tsara tarehy sy mampionona indrindra momba ny fahafatesana sy ny fahafatesana.
Mijery amin'ny finday? Manoro hevitra anao izahay ny hampiodina ny efijeryo hahitana ny endrika tsara indrindra ho an'ny tononkalo tsirairay.
1. Aza mijoro eo amin'ny fako ary mitomany an'i Mary Elizabeth Frye
Ity tononkalo manentana fanahy ity momba ny fahafatesan'ny olon-tiana iray dia manasa antsika hitady azy ireo manodidina antsika amin'ny hatsaran'izao tontolo izao.
Nosoratana toy ny nolazain'ny maty ny tononkalo, milaza amintsika fa na dia omena ny tany ny vatany, dia mitoetra hatrany ny fisian'izy ireo.
Ity hafatra mampionona sy avy am-po ity dia tsy midika hoe tsy afaka manadino olona isika, fa mampahatsiahy antsika izany fa tokony ho tsikaritray ho eo amintsika miaraka amintsika ihany izy ireo.
Aza mijanona eo am-pasako hitomany
Tsy eo aho. Tsy matory aho.
Rivotra arivo aho izay mitsoka.
Izaho no diamondra manjelatra amin'ny lanezy.
Izaho no tara-masoandro amin'ny voa masaka.
Izaho no orana malefaka amin'ny fararano.
Rehefa mifoha amin'ny torimaso maraina ianao
Izaho no fihazakazahana haingana
Vorona mangina amin'ny sidina mihodinkodina.
Izaho no kintana malefaka mamirapiratra amin'ny alina.
Tsy eo aho. Tsy maty aho.
2. Tsy misy alina tsy misy fialofana nataon'i Helen Steiner Rice
Safidy malaza ho an'ny fandevenana ity tononkalo fohy ity satria mampahatsiahy antsika fa na eo aza ny fahafatesan'ny olona iray izay tiantsika indrindra dia handalo ihany ny haizin'ny alahelontsika.
Na dia sarotra zakaina aza ny fahafatesana amin'ny voalohany dia milaza amintsika ity tononkalo ity fa izay maty dia nahita fiadanam-po tamin'ny 'andro mazava'.
Eritreritra manome toky ho an'ireo misaona izany.
Tsy misy alina raha tsy miposaka ny masoandro
Tsy misy ririnina raha tsy misy lohataona
Ary ankoatry ny faravodilanitra maizina
Hihira indray ny fonay…
Ho an'ireo izay mandao antsika vetivety
Avy amin'ny tontolo tsy milamina sy be fikarakarana
Amin'ny andro mazava kokoa.
3. Miverina indray amin'ny fiainana avy amin'i Mary Lee Hall
Ity tononkalo tsara tarehy ity angamba no nalaza indrindra tamin'ny famakiana azy tamin'ny fandevenana ny Princess Diana.
Mamporisika ny mpihaino - ny griever - mba tsy halahelo lava, fa hanaiky ny fiainana indray mandeha indray.
Milaza amintsika izy io mba hitady ireo izay mila fampiononana ihany koa ary handray ny akanjo navelan'ilay olona efa lasa nandao antsika.
Raha tokony ho faty aho ary handao anao vetivety,
Aza manahaka ny sasany voa mafy, izay mitandrina
vigil lava amin'ny vovoka mangina ary mitomany.
Ho ahy - hiverina indray amin'ny fiainana ary mitsiky,
mampangovitra ny fonao sy ny tanana mangovitra hatao
zavatra mampionona fo malemy kokoa noho ny anao.
Fenoy ireto asa malalako mbola tsy vita ireto
ary izaho, ny fahitana azy dia mahazo mampionona anao.
4. veloma nataon'i Anne Bronte
Tononkalo fanta-daza iray hafa momba ny fahafatesana izao izay mampahatsiahy antsika tsy hieritreritra azy io ho veloma farany.
Fa kosa, mamporisika antsika izy hankamamy ireo fahatsiarovana mahafinaritra ananantsika momba ny malalantsika mba hitazomana azy ireo ho velona ao amintsika.
vickie guerrero sy eddie guerrero
Mamporisika antsika ihany koa izy io mba tsy hamela ny fanantenana intsony - manantena fa tsy ho ela isika dia hahita fifaliana sy tsikitsiky izay ananantsika alahelo sy tomany.
Veloma anao! fa tsy veloma
Amin'ny eritreritra malalako anao indrindra:
Ao am-poko no hipetrahany
Ary ho faly sy hampifaly ahy izy ireo.
O, tsara tarehy sy feno fahasoavana!
Raha tsy nahita ny masoko ianao,
Tsy nanonofy endrika velona aho
Azonao atao ve ny manintona hatreto.
Raha mety tsy hitako indray
Io endrika sy endrika tena tiako io,
Ary tsy handre ny feonao aho, ka dia hihaino ihany
Tehirizo, ho an'ny, ny fitadidian'izy ireo.
Io feo io, ny majika misy ny tonony
Afaka manaitra ny akoako amin'ny tratrako,
Mamorona fahatsapana fa, irery,
Afaka manao ny fanahiko mirindra soa.
Ilay maso mihomehy, izay manana ny hazavan'ny masoandro
Ny fahatsiarovako dia tsy tiako kokoa -
Ary oh, izany tsiky izany! izay mamirapiratra amin'ny fifaliana
Na fiteny mety maty tsy afaka maneho.
Adieu, fa avelao aho hankamamy,
Ilay fanantenana tsy azoko hisarahana.
Mety haharary ny fanamavoana, ary hangatsiaka ny hatsiaka,
Saingy mbola mijanona ao am-poko ihany izany.
Ary iza no afaka milaza afa-tsy ny Lanitra, farany,
Afaka mamaly ny vavaka nataoko arivo rehetra aho,
Ary manolora ny ho avy mandoa ny lasa
Faly noho ny fijaliana, tsiky noho ny ranomaso?
5. Raha tokony handeha amin'i Joyce Grenfell aho
Tononkalo iray hafa nosoratana toa ny nolazain'ny maty, mamporisika ireo nilaozany hijanona ho iza izy ireo ary aza avela hanova azy ireo ny alahelo.
Mazava ho azy fa mampalahelo foana ny manao veloma, saingy mila mitohy ny fiainana ary mila miaina azy io hatrany araka izay tratry ny anananao ianao.
Raha ho faty alohan'ny sisa aminareo aho,
Aza manapaka voninkazo, na manoratra vato.
Ary koa, rehefa tsy eo aho, miteny amin'ny feo alahady,
Fa alao ny mahazatra mahazatra fantatro.
Mitomany raha tsy maintsy
Ny fisarahana dia afobe.
Fa mitohy ny fiainana,
Ka mihirà koa.
Azonao atao ihany koa ny mitohy (tononkalo mitohy etsy ambany):
10 amin'ireo tononkalo tsara indrindra momba ny fiainana efa nosoratana
Ahoana no hiatrehana ny tahotra anao amin'ny fahafatesana ary hihavanana amin'ny fahafatesanao
Miresaka momba ny fahafatesana: Ahoana ny fomba hiadian-kevitra momba ny fahafatesana amin'ny toe-javatra samihafa
Fahatakarana ny dingana mampalahelo ary ahoana ny alahelo ny fahaverezanao
Mandalo andro rehefa tsy mahita olona very ianao
Raha tokony ho 'Miala tsiny amin'ny famoizana anao' dia manehoa fiaraha-miory amin'ireto fehezanteny ireto
6. Nahatsiaro anjely iray aho - Tsy fantatra ny mpanoratra
Ity tononkalo momba ny fatiantoka ity dia tsy omena olona manokana, fa tena fanomezana tokoa, na iza na iza mpanoratra.
Milaza amintsika izy io mba tsy hanadino ny fisian'ny olon-tiana efa nodimandry - ilay anjely nofaritana tamin'ireto teny ireto.
Na dia mety tsy miaraka amintsika ara-batana aza izy ireo dia mijanona miaraka amintsika ara-panahy hatrany.
Nahatsapa anjely teo akaikin'ny androany aho, na dia tsy hitako aza ny iray
Nahatsapa anjely aho fa tena akaiky, nirahina hampionona ahy
Nahatsapa oroka anjely aho, malefaka teo amin'ny takolako
Ary o, tsy nisy teny fikarakarana na dia teny iray aza
Nahatsapa ny fikasihan'ny anjely tamim-pitiavana aho, malefaka tao am-poko
Ary niaraka tamin'io fikasihan-tanana io dia nahatsapa ny fanaintainana sy ny fanaintainana tao anaty aho
Tsapako ny ranomasom-bahoakan'ny anjely iray, nianjera moramora teo akaikiko
Ary fantatro fa rehefa maina ireny ranomaso ireny dia ho avy amiko ny andro vaovao
Nahatsapa elatra silky anjely aho nanarona ahy tamina fitiavana madio
Ary nahatsapa tanjaka iray tato amiko nitombo, hery nalefa avy any ambony
Nahatsapa anjely aho fa tena akaiky, na iray aza tsy hitako
Nahatsapa anjely iray teo akaikin'ny androany aho, nirahina hampionona ahy.
7. Ny Journey's Just Begun avy amin'i Ellen Brenneman
Ity misy tononkalo mampihetsi-po sy manome aingam-panahy momba ny fahafatesana izay mamporisika antsika hieritreritra olon-tiana iray tsy lasa, fa toy ny amin'ny faritra hafa amin'ny diany.
Tsy miresaka manokana aorian'ny fiainana ankoatra izany, fa raha izany no inoanao dia hampionona anao tokoa ity tononkalo ity.
mahatsiaro tena ho tsy mendrika
Raha tsy mino zavatra toy izany ianao, dia miresaka momba ny fisiam-piainan'ny olona iray koa ao am-pon'ny olona nokasihiny.
Aza mieritreritra azy ho lasa
vao nanomboka ny diany,
ny fiainana mitazona lafiny maro
ity tany ity dia iray ihany.
Hevero fotsiny fa miala sasatra izy
avy amin'ny alahelo sy ny tomany
amin'ny toerana misy hafanana sy fiononana
izay tsy misy andro sy taona.
Eritrereto ny fomba tsy maintsy iriny
izay azontsika fantarina anio
tsy misy inona fa ny alahelontsika
tena afaka mandalo.
Ary hevero ho velona izy
tao am-pon'ireo nokasihiny…
fa tsy misy zavatra tiana very foana
ary tena tiana izy.
8. Peace My Heart avy amin'i Rabindranath Tagore
Rehefa maty ny olona iray karakaraintsika dia mety ho toa lavitra ny fihavanana amin'ny ho avy. Saingy tsy mila izany, araka ny asehon'ity tononkalo ity.
Raha mikasa ny tsy hanohitra ny fandalovana isika, fa kosa hahita azy io ho vahaolana lehibe amin'ny zavatra mahafinaritra - fiainana iray - afaka manana fiadanam-po isika na dia miala lavitra aza ny olon-tiantsika iray.
Miantso antsika izy hanaiky fa tsy misy maharitra ary manaja fa ny fiainana manome fahafatesana dia ny fomban-javatra voajanahary.
Fiadanam-po, ry foko, avelao ho mamy ny fotoana hisarahana.
Avelao ho faty izany fa fahafenoana.
Avelao hitsonika ao anaty fitadidiana sy ho fanaintainana ireo fitiavana.
Avelao ny sidina mamaky ny lanitra hifarana amin'ny famonosan'ny elatra ambonin'ny akany.
Avelao ho malemy toa ny voninkazo amin'ny alina ny fikasihana farany an'ny tananao.
Mijanona vetivety, ry farany tsara tarehy, ary mangina mangina ny teninao farany.
Miondrika aminao aho ary mitazona ny jiroko hanazava ny lalanao.
famantarana ny vehivavy saro-piaro anao
9. Raha tokony handeha rahampitso aho - Tsy fantatra ny mpanoratra
Tononkalo iray hafa tsy fantatra fiaviana, miantso antsika izy hijery ny fahafatesana fa tsy veloma velively, fa toy ny tetezamita amin'ny fifandraisantsika amin'ireo olon-tiantsika.
Mety tsy eto amintsika intsony izy ireo, fa ny tsapan'izy ireo dia tsapa mandrakariva - ny lanitra sy ny kintana amin'ity andininy ity mety hisolo tena ny tontolo manodidina antsika.
Raha tokony handeha rahampitso aho
Tsy hatao veloma velively,
Fa efa napetrako taminao ny foko,
Ka tsy mitomany mihitsy ve ianao.
Ilay fitiavana lalina ato amiko,
Hahatratra anao avy amin'ny kintana,
Ho tsapanao avy any an-danitra izany,
Ary hahasitrana ny ratra izany.
10. Fiampitana ny fisotroana nataon'i Alfred, Lord Tennyson
Raha jerena voalohany dia toa tsy misy ifandraisany amin'ny fahafatesana ity tononkalo ity, saingy ireo fanoharana ampiasainy dia miresaka mazava momba ny fifindrana amin'ny fiainana mankany amin'ny fahafatesana.
Ny ‘bar’ dia manondro bararata iray na tendrontany rendrika eo anelanelan'ny ranomasina sy ny ony na ny onjan-dranomasina ary ny fanantenan'ny mpanoratra onja lehibe tokoa ka tsy hisy onja eo amin'ity tampon-kavoana ity.
Fa kosa, rehefa manomboka ny diany mankany amin'ny ranomasina (na ny fahafatesana) - na rehefa miverina avy taiza izy - dia manantena fitsangatsanganana am-pilaminana ary hahita ny endrik'ilay Pilot (Andriamanitra).
Sunset sy kintana hariva,
Ary antso mazava iray ho ahy!
Ary enga anie tsy hisy fitarainana eo amin'ny bara,
Rehefa niainga tany an-dranomasina aho,
Fa ny onja toy ny mihetsika toa matory,
Feno loatra amin'ny feo sy ny foam,
Rehefa nivoaka avy tao amin'ny lalina tsy misy fetra
Miverina mody indray.
Lakolosy hariva sy hariva,
Ary aorian'izany ny maizina!
Ary enga anie tsy hisy alahelo veloma,
Rehefa manomboka aho
Ho an'ny tho 'avy amin'ny bourne-ntsika ny Fotoana sy Toerana
Mety hitondra ahy lavitra ny safo-drano
Manantena aho fa hahita mifanatrika ny Pilot
Rehefa tratro ny bar.
ahoana no hideranao bandy
wwe 2019 hall of laza
afaka miteny ve ny bandy raha tianao izy
ahoana no hianaranao matoky
ny fomba fihetsika rehefa avy natory tamina bandy
aza matoky olona tsara loatra loatra
ny sipako tsy mandany fotoana amiko